MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Press Release
by adminmofa on 22/09/2017 at 5:39 PM
PRESS RELEASE The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mrs. Eva HAGER as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Austria to the Republic of the Union of Myanmar. […] ↓ Read the rest of this entry…
by adminmofa on 20/09/2017 at 11:28 PM
State Counsellor’s speech on Government’s efforts with regard to National Reconciliation and Peace. (English Version_PDF) State Counsellor’s speech on Government’s efforts with regard to National Reconciliation and Peace. (Myanmar Version_PDF)
by adminmofa on 02/09/2017 at 6:40 PM
H.E. U Myint Swe appointed as Non-Resident Ambassador of Myanmar to Kenya The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Myint Swe, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to […] ↓ Read the rest of this entry…
အာဆီယံတည်ထောင်ခြင်း နှစ်(၅၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ (၈-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့၊ နေပြည်တော် နှင့် ရန်ကုန်မြို့။) အာဆီယံတည်ထောင်ခြင်း နှစ်(၅၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဝန်ကြီးဌာနအသီးအသီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတို့မှ နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများအား သြဂုတ်လ(၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများအဖြစ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၁-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် စုပေါင်းဂုဏ်ပြု လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၅-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် လူထုစုပေါင်း လမ်းလျှောက်ပွဲနှင့် စုပေါင်းအလှပြစက်ဘီးစီးနင်းခြင်း၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ Sports Complex ရှိ အားကစားကွင်းများ၌ မြန်မာ့ရိုးရာအားကစားပြိုင်ပွဲများကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ […] ↓ Read the rest of this entry…
H.E. U Myint Swe appointed as Non-Resident Ambassador of Myanmar to Mauritius The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Myint Swe, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar […] ↓ Read the rest of this entry…
by adminmofa on 04/08/2017 at 5:01 PM
PRESS RELEASE The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Emilio De Miguel Calabia as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Spain to the Republic of the Union of […] ↓ Read the rest of this entry…